sidee wax loo baran karaa - Daryeel Magazine
sidee wax loo baran karaa
waxa ugu horreeya in marka horeba aas waxbarashadda isku diyaariso, lana timaado shuruudo ku habboon. Shalay dugsigii dhexe iyo kii hooseba masuuliyadda waxbarashaddaada iyo mustaqbalkaagu adiga gacantaada kuma wada jirin, waxaad haysatay kaalmo. Haddii aad xasuusato miiska aad wax ku akhrinayso waa lagaa tirtiri jiray, haddii ay wax kugu adkaadaan waa lagaa caawin jiray, buuqana iyo dhibkana waa lagaa dhowri jiray. Maanta arrinku sidii ma aha. Mas´uuliyaddu adiga ayey gacanta kuugu jirtaa. Baruhu waa iftiimiye waxa uu kuu sheegayaa waa wax kooban oo kaliya. Waalidkaa talo ayuunbaa idinka dhaxaysa. Waxaa lagaa doonayaa marka hore in aad waxbarashadda si fiican ula qabsato, waqti u haysid, niyad adagna la timaado, si wax kasta oo kugu adkaada aad uga natiijo uga keento.
Qaado taladan uu aniga barahaygii ii sheegay.
Haddii aad ku dadaasho in aad imtixaanka ku gudubto, waxaa laga yaabaa in aad dhacdo, laakiinse haddii aad ku dadaasho in aad ardayga koowaad noqoto, waxaa dhici karta in aad ugu yaraan ardayga labaad ama seddexaad noqoto. Xiisee waxa barahaagu sheegaayo, akhri buugaag kale oo la mid ah kan aad dhigato. La saaxiib kuwa waxbarashadda aad u xiiseeya ee dadaalaya, haddii aad la saaxiibto kuwa wax walba u arka berri ayaan samayn doonaa, adna sidooda ayaad noqon.
Is waydii saddexdaan su´aalood mar walba:
Maxaan halkan u joogaa?
2. Waa maxay ujeeddada aan ka leeyahay waxbarashaddan?
3. Waa maxay qorshahayga mustaqbalkeyga?
Astaamaha ardayga fiican:
Waa qof soo jeeda oo waxa uu baruhu sheegaayo la socda oo dhug u leh. Waxa lagu yaqaan xusuus qor in uu meesha muhiimka ah qorto ( calaamadaysto). Waxa uu weydiiyaa su´aalo la xiriira mawduuca haddii uu mugdi uga jiro. Ma fiiriyo mana faalleeyo shakhsiyadda iyo qabka horjoogaha, ee waxa uu ka faa´´iidaystaa waxa uu barayo. Ardayga dugsiga sare ku jira waxa laga doonayaa in uu awooddiisa wax akhriska aad u kobciyo, sababta oo ah waxbarashadda inteeda badani waa akhris, oo waxa laga doonayaa in aad muddo gaaban ku soo akhriso buuggaag dhowr ah, isla markaasna ku soo fahamto. Intaas iyo in kaleba adiga laga doonayo haddii aad la timaado waxa hubaal ah in aad waxbarashaddaada ku guulaysanayso, ujeedadii aad lahaydna gaarayso.
Habka ugu fiican ee cashar aad akhrisay aad u xasuusan karto
Akhriska dadku siyaabo kala duwan ayey wax u akhriyaan, taasoo weliba ku xiran xaaladda iyo waxa uu qofku akhrinaayo. Fahmo waxay akhriyeysaa maqaal lugu daabacay wargayska galabtii soo baxa, waa aay daallan tahay oo waxa aay ka timid shaqadda, iyadoo saran bas. Faysal oo aay isku bas saran yihiin ayaa waxa uu isna akhrinayaa waraaqo isku dheggan oo uu barihiisu u qaybiyey ardayda, kuwaas oo uu baruhu si faah-faahsan u dul maray. Faysal waxa uu kaga duwan yahay Fahmo, waxa uu u akhrinayaa si aan deg-deg ahayn. Marka uu meel muhiim ah soo gaaro waxa uu ku calaamadeeynayaa qalin. Si ay hadhow ku soo noqoshadda akhriskiisa iyo wax ka qoriddiisuba ugu sahlanaato, isla markaana uu su´aalaha ugu imaan doona uga jawaabi karo. Labadaa qof ee baska wada saran ayaa tusaale innogu filan,hababka kala duwan ee wax akhrisku ku imaan karo, waxaana fiican in aad sidan yeesho marka aad wax akhrineyso gaar ahaan cashar lagaa sugaayo.
Dulmar guud ku same cashirka guud oo aad wada akhrisay.
2. Dhug u yeelasho oo hoosta ka xariiq meesha muhiimka ah. ( calaamadee)
3. Kor u akhri oo is maqashii ama qof kale ha kaa dhegeysto, taas micneheedu waa in aad fahantay casharka.
4. In aad wax ka qorto adigoo soo gaabinaya casharka isla markaasna meel kasta oo aay su´aali ka imaan karto aad qiyaasi karto kana jawaabi karto.
Sidee Caado Loo Dhigtaa Wax Akhrinta? Sidee Se La isku Jeclaysiin Karaa? Sidee Caruurta Loo Jeclaysiin Karaa Wax Akhriska? Sidee Loo Hagaajin Karaa Qoyska? Sidee Ardaygu Ugu Diyaar Garoobi Karaa Uguna Guulaysan Karaa Imtixaannada?